Fifandraisan’ny reny sy ny zaza ary ny fitiavana : mialohan’ny firaisana ara-nofo no efa mitsiry izany. – Sombiniaiko
Fianakaviana Fomba fanao amin'ny zaza Tsara ho fantatra
14 juin 2021 Anny 0 Comment fifandraisana, fitiavan-dreny, fitiavana, reny sy zaza
Mitombo sy mivelatra tsikelikely ny fifankatiavan’ny reny sy ny zaza, toy izany ihany koa ny fitiavan’ilay zaza ny manodidina azy amin’ny alalan’ny fifaneraserana. Ahoana no fomba fisehoany ary inona mety hitsiriany ?
Ny fitiavan-dreny, io no resaka faheno matetika.
Fifanakalozana matetika no mora handrafetana ny fifandraisana sy ny fitiavana (sary – connexion photography)
Mazàna dia io fitiavan-dreny io no mby voalaza satria izy no akaiky ilay zaza amin’ny fotoana ahaterahany ka hatramin’ilay zaza lehibe. Raha toa ka sambany amin’ilay vehivavy ny miteraka (zaza voalohany) dia mila volena izany fitiavana izany. Mivohatra miandalana manaraka ny fotoana sy ny fifanankalozana misy amin’ilay reny sy ilay zaza ny hitomboany. Ny fikirizan’ny reny sy ny finiavana ataony ihany no mametraka tsara io fitiavana mba hahazo toerana manan-danja eo amin’ilay zaza. Tsy azo adinoina ihany koa fa ny tantara nolalavon’ilay reniny dia antony iray mahamety ny fifandraisana amin’izy roa. Ohatra, ny zava-nitranga tamin’ny fitaizana azon’ilay reniny dia hareniny amin’ilay zaza mba tsy hisian’ny banga, tsy fahafenoana na lesoka toy ny fahatsapany azy teo aloha.
Amin’ny fotoana inona no manomboka izany fifandraisana izany ?
Tsy mbola ao am-bohoka ankory ilay zaza no efa manomboka miforona ilay fitiavana. Izany hoe alohan’ny firaisan’ny olon-droa dia efa mipetraka ny fitiavan’ilay vehivavy te hanan-janaka. Rehefa izany dia manomboka ao am-bohoka ny fifandraisana ara-pikasihana (vatana, filàna sns…) voalohany eo amin’ilay reny sy ilay zaza. Eo ihany koa ny famaliana ny filan’ilay zaza ara-tsakafo na ara-pihetsika sns… Mibahan-toerana sy misy fiatraikany koa ny fifandraisan’ilay reny sy ilay dadany mandritra io fitondrana am-bohoka io. Izay zava-mitranga rehetra dia tsapan’ilay zaza ary mamolavola azy sahady amin’ny mety zavatra miandry azy. Rehefa tonga ny fotoana hivoahan’ilay zaza ka ihaonany mivantana amin’ny reniny dia tsarovy fa eo no manomboka hanehoany mivantana hita maso ny fihetsika izay voarainy mandritra ny fotoana tao an-kibo. Sady mandray izy no maneho mandritra izany fotoana izany. Ny rotsirotsindreniny, ny feo, ny fihetsem-po, ny feho, ny fihetsika sy ny zavatra manodidina azy dia azony raisina ho refim-pamantarana ny fomba fifandraisana sy ny toe-java-mitranga rehetra.
Ahoana ny handrafetana ny fifandraisana amin’ilay zaza ?
Fifanakalozana matetika amin’ny sy ny fitaizana azy ihany no haingana sy mahaomby. Raha toa ka efa lehibebe indray, mifantoka kokoa ao amin’ny fomba fiteny sy firesahanao azy indray izy. Raha masiaka aminy ianao dia ho tsaraony foana izany ary mety ho sarotra ny hanarany azy. Matetika ihany koa ny fametrahana ny fisiany ao anatin’ny fianankaviana (mitondra kilalao ho azy, fanomezan-danja ny zavatra atao sns…) dia mampitsiry
ilay fifandraisana sy fitiavana ao anatiny.
Ny zava-drehetra atao na amin’ny teny na amin’ny fihetsika dia misy lanjany be amin’ny fifandraisana sy ny fitiavan’ilay zaza anao. Kolokoloy tsara izany mba hisin’ny firindrana eo amin’ny ankohonana.
← Syndromes de Williams : Un syndrome difficile à diagnostiquer